Bụrụ Onye Mmekọ - IntoKildare
Kildare Tourism Partner Mmemme
Anyị chọrọ inyere azụmahịa gị aka ịme nke ọma na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na asọmpi. Dịka onye gị na Into Kildare, azụmaahịa gị ga-erite uru site na mkpọsa ahịa azụmaahịa mpaghara, mba na ụwa.
County Kildare, nke nwere akụkọ ihe mere eme nke Ireland Ancient East nke Ireland, na-enye ndị ọbịa nleta na ahụmịhe dịgasị iche. Mmemme mmemme anyị na-enye akara gị ohere ị nweta ọtụtụ ndị na-ege ntị site na mkpọsa ahịa anyị na ịkparịta ụka n'networkntanet na ndị mmekọ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na nkwado.
Gịnị Mere I Ji Kwesị Isonye?
Anyị nọ ebe a iji nyere aka:
Ọnụ, anyị siri ike. Dịka onye gị na Into Kildare, ị na-erite uru site na usoro ịre ahịa njem ịjikọtara ọnụ wee nweta ebe ị na-aga ahịa na-erute mba na mba ụwa. Dịka nzukọ na-enweghị uru, ụgwọ niile akwụgoro na mmepe na ịzụ ahịa na County.
Ndepụta na weebụsaịtị IntoKildare.ie ma na-akwalite nke ọma site na ntanetị mmekọrịta anyị pụtara na ihe karịrị ndị na-eso 35,000 ga-anụ maka azụmahịa gị
Ngosipụta nke azụmahịa gị na broshuọ njem nlegharị anya nke County Kildare kesara mba, ụwa na ntanetị
Ọnụnọ n'ahịa ịzụ ahịa, mkpọsa mgbasa ozi gafee mbipụta, redio na ọwa dijitalụ na akwụkwọ akụkọ na nchekwa data na-eto eto na-eto eto
Ohere iji jikọọ na onye ọrụ Digital anyị iji kwalite onyinye ị na-enye
Ọkpụkpọ òkù ịbanye na Kildare ịkparịta ụka n'eventsntanet, ihe omume azụmahịa na ọzụzụ iji nweta nghọta site n'aka ndị ọkachamara na izute ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Tonweta ndị otu njem njem raara onwe ha nye maka ndụmọdụ, nkwado na nduzi
Nzipụta na isi ahịa azụmaahịa mba na mba na ahịa na-egosi
Nsonye na njem maka mgbasa ozi, ahia, blogger na njem njem ndị njem njem
Accessnweta ụzọ na ọnụahịa dị oke ọnụ maka Tas nke Kildare
N'agbanyeghị ụdị azụmahịa gị, Into Kildare nwere ike ịnye ọkwa mmekọrịta kachasị mma maka mkpa gị.
N'ime Kildare Ndepụta Ndepụta
Ọnụnọ na inkildare.ie nwere ike inyere aka bulie azụmaahịa gị site na ijikọ gị na ndị mmadụ na-atụle ileta County Kildare na Ireland. Nke a ga - agwa ndị ọbịa ebe ị nọ na ihe ị na - eme.
Mepụta Ndepụta Gị
Inweta ndepụta gị na-arụ ọrụ nke ọma bụ isi ihe na-eme ka ndị na-eme njem na azụmahịa gị, yabụ, ọ bara uru iwepụta oge iji setịpụ ya yana ọtụtụ ozi dịka o kwere mee.
Tinye ozi azụmahịa gị niile. Nke a gụnyere aha azụmahịa gị, ozi kọntaktị, njikọ weebụsaịtị, njikọta mmekọrịta mmekọrịta, ozi TripAdvisor, ọnọdụ azụmahịa nkịtị na onyonyo.
Ozugbo imepụta ndepụta gị, a ga-eziga ya na Into Kildare iji hụ na ozi niile dị mkpa gụnyere. Ozugbo emechara, ndepụta gị akwadoro ga-egosi na inkildare.ie.
Na-edezi ozi gị yana debe akaụntụ gị n'ọrụ
Ọ dị mkpa ka ịlele ndepụta Into Kildare gị oge niile iji hụ na ozi gị dị ọhụrụ. Anyị na-arịọ ndị ọrụ niile ka ha banye na akaụntụ ha ọ dịkarịa ala otu ọ bụla n'ime ọnwa 12 iji mee ka ndepụta ahụ na-aga n'ihu na weebụsaịtị.
Banyere n'ime Kildare
Into Kildare bụ ụlọ ọrụ gọọmentị na-eme njem nleta maka County Kildare. Ndị Kildare County Council na-akwado ya, n'ime Kildare na ndị na-eketa oke na-etinye aka dị ka olu nke njem nlegharị anya na-anọchite anya ụlọ ọrụ 100 iji bulie ọnụọgụ ndị ọbịa ma zụlite Kildare dị ka onye na-eduga ndị ọbịa.
Otu anyị raara onwe ya nye nọ ebe a iji nyere gị aka ịnye ozi ndị ọbịa, yana ịza ajụjụ gbasara mgbasa ozi na ajụjụ PR.